Fitaovam-pianakaviana mampidi-doza amin'ny vokatra iombonana
Maro ny zavatra simika ao an-trano no mampidi-doza. Mety ho azo antoka tsara izy ireo rehefa ampiasaina araka ny tari-dalana, nefa misy akora simika misy poizina na simba amin'ny fotoana iray ho varo-dratsy kokoa.
Ireto misy lisitry ny zavatra simika mampidi-doza indrindra ao an-tokantrano, ao anatin'izany ireo fitaovana hijerena sy ny toetry ny loza.
Air Fresheners. Ny fanadiovan'ny rivotra dia mety ahitana vondron'olona simika mampidi-doza. Formaldehyde dia manorisory ny havokavoka sy ny aretim-borona ary mety miteraka homamiadana. Ny dite dia mampirehitra, manelingelina ny maso, ny hoditra ary ny havokavoka, ary mety miteraka lozam-pifamoivoizana mahafaty ao amin'ny olona marefo. Misy mpanadio vaksiny sasany ahitana p-dichlorobenzene, izay mpanimba poizina. Ny tiroida aerosol ampiasaina amin'ny vokatra sasany dia mety hipoitra ary mety hiteraka fahavoazana eo amin'ny rafi-pitabatabana raha toa ka matroka.
Amoniaka. Ny amniaka dia fifangaroana tsy mety afaka manelingelina ny rafi-panafody sy ny membres mipitika raha mitroka, dia mety hitera-pahavoazana raha simban'ny hoditra, ary hihetsika amin'ny vokatra miteraka (toy ny bleach) mba hamoahana gazy mahafaty amam-borona.
Antifreeze. Ny antifreeze dia glycol etylène , izay simika misy poizina raha mitelina. Ny fanindroany dia mety miteraka fanindroany. Mety hampisy ati-doha matanjaka, fo, voa, ary fahasimban'ny taova hafa ny fisotroan-dronono. Manana tsiro mahafinaritra ny glycol etylène, noho izany dia manintona ny ankizy sy ny biby fiompy. Ny antifreeze dia matetika ahitana chimique mba hahatonga azy hanandrana ratsy, fa ny tsiranoka dia tsy ampy ny fanakanana ampy. Ny fofona mamy dia ampy hampiantrano biby.
Eau de Javel. Ny fivalozana ao an-trano dia misy hypochlorite soly, toy ny chimique izay afaka miteraka ny fahasosorana sy ny fahasimbana eo amin'ny hoditra sy ny rafi-panafody raha toa ka nidona na nipoitra teo amin'ny hoditra. Aza avela hifangaro amin'ny amoniaka na amin'ny fanadiovan- tsakafo na ny fanadiovana rano, raha mety hampidi-doza sy mety hidona amam-borona mety hahafaty.
Clean01_Hafatra ho anao Ny fanadiovana fanariana matetika dia miteraka lye ( hydroxide hydroxide ) na acid asidra . Ny chemicalic dia mety hiteraka voka-dratsin'ny otrik'aretina tena goavana raha misedra amin'ny hoditra. Diso toaka izy ireo. Ny fandoroana rano fisotro madio dia mety hahatonga fahajambana.
Laundry detergent. Ny fanadiovana laundry dia mirakitra zavatra simika samihafa. Ny fandefasan'ny mpitrandraka ketika dia mety miteraka zava-mahadomelina, mando, fifandirana, ary koma. Ny fanadiovana tsy misy ionika dia manimba. Olona maro no mahatsapa ny fahatsapana simika amin'ny loko sy ranomanitra atolotra ho an'ny fiterahana sasany.
Mothballs. Ny baolina kesika dia p-dichlorobenzene na naphthalene. Samy goavam-be ny akora simika ary fantatra fa miteraka aretina, aretina, ary aretina amin'ny maso, hoditra ary ny rafi-panafody. Ny fiterahana maharitra dia mety hitarika ho amin'ny fahavoazana ny fo sy ny fanabeazana katarakta.
Motor Oil. Mety hiteraka homamiadana ny fiparitahan'ny vaksiny amin'ny solika. Olona maro no tsy mahafantatra fa misy metaly mavesatra ny menaka motera, izay mety hanimba ny rafi-pitabatabana sy ny rafitra hafa .
Oven Cleaner. Ny loza ateraky ny fanadiovana ny oven dia miankina amin'ny firafetany. Misy fanadiovana oven sasany ahitana hydroxide siramamy na hydiumxide potassium, izay tena mampidi-doza. Ireo zavatra simika ireo dia mety ho faty raha mitelina. Mety hitera-pahavoazana amin'ny hoditra na ao amin'ny havokavoka izy ireo raha atahorana ny rivotra.
Rat Poison. Ny poizina poizina (rodenticides) dia latsa-danja noho ny taloha, fa mitoetra ho zava-poana amin'ny olona sy ny biby fiompy. Ny ankamaroan'ny rodenticides dia misy warfarin, singa iray mampidi-doza ao anatiny.
Windshield Wiper Fluid. Ny ranon-tsoavaly dia zava-poana raha misotro azy ianao, ary ny sasany amin'ireo zavatra simika misy poizina dia voapoizina amin'ny hoditra, noho izany dia manapoizina ny hikasika. Ny glycol etylène mangidy dia mety mahatonga ny atidoha, ny fo ary ny voa, ary angamba ny fahafatesana. Ny fanafody dia mety miteraka fanindroany. Ny metanôl ao amin'ny fluorin-tsigara dia azo alaina amin'ny hoditra, na nidona, na nopotehina. Manimba ny atidoha, ny atiny ary ny voa ny methanol ary mety hahatonga ny jamba. Ny alikaola isopropyl dia mihatra amin'ny rafi-pitabatabem-bahoaka, izay miteraka fahantrana, tsy fahatsiarovan-tena, ary mety ho fahafatesana.
Fitaovana fanodidinan'ny vatolampy voadika
Ahoana ny fomba fanaovana ny ronono - Fitaovana ravina tsotra
Ahoana no hanesorana Super Glue
Inona no atao hoe siramamy?
Nahoana no mianatra Engineering?
Ny fomba hakana sary mineraly
Ny singa simika amin'ny saran-dalana
Fitsaboana simika tsotra ho an'ny sakafo
16 Fanontaniana mahazatra amin'ny fanoratana fanombohana
Ny Fetin'ny Fanehon'ny Tompo
Iza moa ireo Fariseo tao amin'ny Baiboly?
Galatiana 1: Famintinana ny Baiboly
Fitambarana paika (grammaire)
Ny fahasamihafana eo amin'ny teny frantsay roa ho an'ny "vaovao"
Fanampiana an-tariby ho an'ny Wakeboarding
Fampianarana ara-tsosialy sosialy - Fomba entina handinihana ireo mpianatra
Biographie momba an'i Goffman
Barack Obama's Secretaries Press
Inona ny "Fatwa"?
Free Problem Energy and Pressure Examples
Fanontaniana haingana sy valiny momba ny matoanteny matoanteny sy ny matoanteny amin'ny teny anglisy
Inona no atao hoe Darwinisma?
Torohevitra tsotra ho an'ny fanovàna ny fandaharam-pianarana ho an'ny sekoly ambaratonga voalohany
Ireo rehetra momba ny fiakaran'ny hafanana
Fampiofanana Volleyball: Fipoahana baomba
University University of St. Louis Admissions